Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Boosaaso iyo barakac ka billowday | Arrimaha Bulshada
Home News Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Boosaaso iyo barakac ka billowday
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Boosaaso iyo barakac ka billowday
Bulsha:- Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in weli xiisad xoogan ay ka taagan tahay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi, taas oo u dhexeysa madaxweynaha maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada PSF-ta.
Dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada loo dirayo labada dhinac, waxaana ismidada Puntland oo shir ka yeeshay xaalka Boosaaso ay ku baaqeen in la wada-hadlo.
Xiisaddan ayaa hal todobaad jirsatay, waxaana ay ka dhalatay, markii uu Saciid Deni xilka ka qaaday agaasimaha hay’adda PSF isla-markaana u magacaabay agaasime cusub.
PSF-ta ayaa waxaa tababara Mareykanka, isla-markaana siiya mushaaraadkooda iyo qalabkooda, waana ciidamo gaar ah oo loogu talagalay la dirirka Al-Shabaab & Daacish.
Arrimahan soo kordhay iyo xaaladda qasan ee Puntland ayaa ku soo aadeyso, xilli dalka uu jiro xaalad kala guur ah iyo marxalad doorashooyin oo ay ka taagan tahay dood xoogan.